XXXXXXXX***************xxxxxxxxxxxxxxxx[Tutorials] | Shwekoyantaw
Published : 2:33 AM Author : shwekoyantaw
မနေ့ ညကပျင်းပျင်းနဲ့... ဒီ ဘန်ဂလားဆိုက်ဒ်တွေ scan ရတာနဲ့ ညောင်းလာလို့samuels080 နဲ့တော်ကီပစ်နေကြတာ တောင်ရောက်မြောက်ရောက်ပေါ့ ... အဲ့မှာ သူကမေးတယ်..ဘာလုပ်နေလဲလို့.. ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ကျနော့် ဝသီအတိုင်း တောင်ရောက်မြောက်ရောက်လို့... ပြီးတော့ သူ့ ကိုပြန်မေးတော့ http://shweo.com/myanmar-videos/play/4250 ရွှေအိုးဆိုက်ဒ်မှာ မြန်မာကားကြည့်နေတယ် (သူကမလေးမှာလေ) ဒါနဲ့ ကိုလည်း ကိုယ့်နိုင်ငံကော်နက်ရှင် နဲ့ အားကျမခံ ဘယ်ရမလဲ ဖွင့်ကြည့်တာ .. အမယ် .. သကောင့်သား connection ကတတ်ချင်ယောင်ဆောင်ပြနေတာ ... ဒါနဲ ပဲ .. အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာ .. shweo ဆိုက်ဒ်ကိုတင်းတင်းနဲ့...လက်ကလဲ ကမြင်းချင်တာနဲ့... တချက်ရှိုးလိုက်တယ်.. အဲ့မှာ .. shweo ဆိုက်ဒ်က အကြမ်းဖျင်းကြည့်လိုက်တော့ အပေါက်ရှာမတွေ့ ဖူးပေါ့ ...
ဒါနဲ့ဘယ်ရမလဲ ... သူ့ip scan တယ်.. သူနဲ့ host တူတာလိုက်ရှာလိုက်တာ.. http://www.shwehousing.com/ ဒီဆိုက်ဒ်ကလေးတွေ့ ပါလေရော .. အခမဲ့ကြော်ငြာ ( အခန်းတွေ ) လို့ ရတဲ့ မြန်မာ ယsearch engine ဆိုက်ဒ်တမျိုးပါပဲ .. သူ့ဆိုက်ဒ်ကိုလဲ အကြမ်းဖျင်းကြည့်လိုက်တာ .. မလွယ်ဘူး .. ရှာလို့ လဲမတွေ့ ဘူး .( ဆိုက်ဒ်ကဒီလိုပုံစံနဲ့ ရေးထားတာကိုး http://www.shwehousing.com/ads/index/page/6. ) ဆိုပြီး တော်ပြီလို့လက်လျှော့မယ်အလုပ်မှာ ... ညာဘက်ထောင့်နားက အပြာရောင် button လေးနဲ့free ကြော်ငြာနေရာတွေ့ ပါလေရော .. ဒန် တန့်တန် .... :mrgreen:
စဉ်းစားလိုက်တယ်.. ကြော်ငြာ ... ပြီးတော့ အခန်းတွေဆိုတော့ picture ပါမှာပဲ ... ဒါဆို upload ကတော့မဖြစ်မနေပေးကိုပေးထားရမှာဆိုပြီး .. အဲ့ဒိနေရာ ဝင်စမ်းမယ်ကွာဆိုပြီး.. ဆက်ကြည့်ကြပါ...
ကျနော် တဆင့်ချင်းစီ ပုံနှင့်တကွရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် ...
ဒီအောက်ကမြင်၇တဲ့အတိုင်း အဲ့နေရာမှာ free ကြော်ငြာတင်ဖို့ နေရာပါ...
ဒီအောက်ကပုံကတော့ .. ကြော်ငြာတင် ( image upload ) function ရဖို့ အတွက် ... ကြော်ငြာတင်မည့် အပေါ်ကလင့်ခ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်
ကဲ.. နောက်တပုံ .. ဒါကတော့ form ဖြည့်ဖို့ နေရာနဲ့ကျနော်တို့ အဓိကရှာနေတဲ့ ( လုပ်ကွက် ) image upload ကိုတွေ့ ပါပြီဗျာ ... အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ
အဓကနေရာလာပါပြီ ... ကျနော်အပေါ်က ဖောင်မှာ nick တို့ph num: တို့email တို့ကို ဖြည့်လိုက်ပါ ( အစစ်တွေမလို ) .. ခု ဒီဆိုက်ဒ်မှာ တွေ့ ရတဲ့ image uploader လေးက ကိုယ့်စက်ထဲက shell ကိုရွေးပေးလိုက်တာနဲ့auto uploader လေးပါ .. နောက် page ကိုမပြောင်းပဲ ဒီ page မှာတင် upload တင်ထားလိုက်ပါတယ် .. ကဲထားပါ ... ခုတင်လိုက်ပြီ .. အဲ့တော့ ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်..
information လိုတာရယ် shell ရယ် upload တင်ပြီးရင် click လိုက်ပါ .. နောက်တစ် page ကိုေ၇ာက်အောင် .. ခုနက shell က ပလိန်းဂျီး upload တင်လို့ ရလိုက်တာကိုရော သတိထားမိကြရဲ့ လား .. အဲ့ဒါပဲ အဓိက အမှား ... ဆိုက်ဒ်ရဲ့vulnerable hole .. file extension ကိုသေချာမစစ်ဘူး .. အကုန်လက်ခံတဲ့ အတွက် .. ခံပေတော့ပေါ့နော့် ... ...
ကဲ ကဲ .. အောက်ကပုံပေါ်လာရင် ... ကိုယ့် ads တင်ထားတာကိုပြန်ကြည့်ကြမယ်.. click လိုက်ပါ ပြထားတဲ့အတိုင်း
ဒါဆိုရင်တော့ ကိုတင်ထားတဲ့ shell ပါပါတဲ့ ads ကိုတွေ့ ၇မှာဖြစ်ပါတယ်... ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ... photo နေရာမှာ shell ကိုတင်ထားတော့ photo ကိုရွေးပေးပါ .. အနီရောင် လေးထောင့်ကွက်လေးပေါ်နေတာတွေ့ ရပါလိမ့်မယ် ... (မတွေ့ ရင် ဖော်မြူလာမှားနေလို့ခိ ... ခိ)
ကဲပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း photo နေရာကိုရွေးပြီး၇င် ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ .. ဒီတိုင်းထားပါ... .. ခင်ဗျားတို့ လုပ်ရမှာက .. right-click ဖွင့် view page source code ကိုရွေးပြီး သူ့page ရဲ့source code တွေကိုရှာမယ်... ဘာလို့ လဲသိလား... ** ကျနော်တို့ ခုနကတင်ထားတဲ့ shell နေရာကိုအတိအကျသိရအောင်လို့ ပါ **
အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း code မျိုးလေးကိုရအောင် ရှာပါ .
BINGO ... here we go .. I successfully uploaded shell to shwehousing.com >>
ကဲ ကဲ ပုံနှင့် တကွ သေချာရှင်းပြထားတယ်နော် ... အဲ့တော plx do not touch that mm site .. this tutorial for educational purpose only. ကိုယ့်ကိုကို hacker လို့ ခံယူထားရင် hacker တွေရဲ့'ethic' အတိုင်းတော့နေကြဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်... ဒါကြောင့်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ .. ကိုယ့်နိုင်ငံဆိုက်ဒ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ...
ဒီဟာကို tutorial section ထဲမှာဘာလို့ ထည့်တာလဲဆိုတော့ shell upload တင်ပြီးပြန်ရှာပုံကိုပါသိစေချင်လို့သေချာရှင်းပြထားတဲ့အတွက်ပါ ...
shweo နဲ့အဲ့ဒိ http://www.shwehousing.com နဲ့ က host တူပါတယ် .. shell တင်ပြီးရင်ကြည့်ကြည့်ပါ ...
ကျနော် .. tutorial ဆိုတော်ယုံရေးခဲပါတယ် .. (သောက်ရမ်းပျင်းတာ :D) ခုတော်တော်လေးတောင်ညောင်းသွားဘီ ..............
**** copyright@2012<dongoth> ***** this tutorial is made by me. but you can share it. have fun ..
Labels: Exploit, knowledge, Shell code, tutorial, website |